‘टेकुमा मात्र होइन तत्काल अन्य ठाउँमा गएर कोरोना परीक्षण गर्नुपर्छ’
डा. ल्हामो याङ्चेन शेर्पा
कोरोना भाइरस २०१९ मा उत्पन्न भएकाले कोभिड-१९ भनिएको हो। यसको आकार श्रीपेजको जस्तो भएकाले कोरोना भाइरस नामाकरण गरिएको हो। कोरोना बाहिरबाट आएर संक्रमण गर्ने भाइरस भन्ने बुझिन्छ।
साधारण भाषामा कोरोना भाइरसलाई कसरी बुझ्ने?
पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको भाइरस र व्याक्टेरियाका विषयमा हो। व्याक्टेरिया र भाइरस दुई फरक हुन् भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। मानिसहरुको शरीरमा व्याक्टेरिया हुन्छन्। जुन शरीरका लागि आवश्यक पर्छ। व्याक्टेरिया दुई किसिमका हुन्छन्- गुड र ब्याड व्याकटेरिया। पेटमा रहने व्याक्टेरिया पनि हुन्छ। व्याक्टेरिया शरीरमा आवश्यक पर्छ।
तर, भाइरस शरीरलाई आवश्यक पर्दैन। बाहिरबाट आएर शरीरमा संक्रमण हुने भएकाले यसलाई भाइरस भनिएको हो। शरीरमा भाइरस हुनुहुँदैन। कोरोना भाइरस एकदम बलियो भाइरस हो। अन्य भाइरस साधारण सिटामोल खाँदा निको हुने हुन्थ्यो। तर, कोरोना भाइरस छिट्टै अन्यमा सर्ने र शरीरमा संक्रमण गर्ने खालको भाइरस हो। यो एकदम नयाँ खालको भाइरस हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।
अन्य भाइरसको तुलनामा के फरक छ कोरोनामा ?
डब्लुएचओले भनेको मापदण्ड अनुसार, रुघा लागेको र ज्वरो आएको व्यक्तिबाट टाढा बस्नु भनेर सूचना प्राप्त भएको छ। विश्वमा भएको कोरोनाको संक्रमण हेर्दा चीनको वुहानबाट उद्दार गरेर लगिएका जापानीहरुमा १७ देखि ३० प्रतिशतमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएपनि उनीहरुमा कुनै लक्षण देखिएन। रुघा खोकी केही लागेन। १४ दिनसम्म केही लक्षण देखिएन।
कोरोना पोजेटिभ देखिएका व्यक्तिहरु विना लक्षण रहन सके। शारीरिक क्षमता बलियो भएकाले लक्षण बाहिर देखा नपरेको हुनसक्छ। जस्तै -एउटा बच्चालाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ थियो। तर, उनलाई केही लक्षण थिएन। उक्त बच्चालाई दिशाबाट कोरोना भाइरस भेटिएको थियो। कोरोना भाइरस सहजै थाहा पाउन पनि मुस्किल छ।
उपचार गराएर निको भएका व्यक्तिमा पुन: भाइरस हुन्छ कि हुँदैन ?
चीनले वुहानमा गरेको अध्ययनमा उपचार गराएका फर्किएका व्यक्तिहरुमा केही न्यून संख्यामा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ । भाइरस कम गर्ने माध्यम मात्र छ। पुरै न्यून गर्ने उपाय छैन।
न्यून गर्ने त्यो उपाय के हो?
अहिले एकदम प्राथमिकता दिनुपर्ने सरसफाइ र कोरोनाको परीक्षण नै हो। पहिला भाइरस कहाँबाट फैलिएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। भाइरस लागेको व्यक्तिमात्र होइन, भाइरस कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्छ। भाइरस संक्रमित भएको व्यक्ति छ भने आइसोलेसनमा बस्ने, कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको व्यक्ति अन्य व्यक्तिको सम्पर्कमा छ भने उसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उसले समाएको सामान सफा गर्ने र फाल्न मिल्ने सामान नष्ट गर्ने, खोकी लागेको व्यक्तिको नजिक नजाने, रुघाखोकी लागेको व्यक्तिले प्रयोग गरेको सामान अन्य व्यक्तिले प्रयोग नगर्ने, एउटै भाडा भए एण्टी माइक्रोबेल प्रयोग गरेर सफा गर्ने। कोरोना भाइरस निको पार्ने कुनै खोप छैन।
तत्कालीन समयका लागि आफू सर्तक हुनु उत्तम उपाय हो। कोरोना भाइरस मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ। कोरोना भाइरस एक अर्कोमा दोब्वर तेब्वर हुँदै सर्ने भाइरस हो। विशेषगरी, वृद्ध अवस्थाका व्यक्तिमा छिट्टै असर गर्ने भएकाले उच्च सर्तकता अपनाउन सक्नु नै न्यूनीकरणको उपाय हो।
भाइरसको आयु कति हुन्छ?
शरीरभन्दा बाहिर सामानमा पनि केही घण्टादेखि लिएर तीन-चार दिनसम्म रहन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। त्यो अध्ययनले नौ दिनसम्म पनि बाहिर रहनसक्छ भनेको छ। नेपाल सरकारले भीडभाड र सार्वजनिक यात्रा नगर्न र भीड हुने क्षेत्रमा नजान आग्रह गरेको पनि त्यही कारणले हो।
कोरोना भाइरस न्यून पार्ने कुनै औषधि छैन?
उपचारका लागि केही औषधिहरुको परीक्षण चलिरहेको छ। केही औषधि मध्येमा एउटा अलिकति प्रभावकारी देखिएकाले धेरै देशले प्रयोग गरिरहेको एण्डी भाइरल ड्रक रेन्डेसेविर हो। यो औषधिले भाइरस दोब्बर तेब्बर बनाउनु भन्दा कम गर्ने रहेछ। यसको प्रयोग गर्दा कसैमा राम्रो देखिएको छ। यसको विभिन्न चरणमा परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षणको नितिजा आएपछि भ्याक्सिन बनाउन तथा औषधि बनाउन एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ। निको पार्ने औषधि भने छैन। तर, कम गर्ने उपायहरु खोजी गर्ने काम भइरहेको छ ।
कहिलेसम्म कारोनाको असर रहिराख्ला ?
चीनमा कोरोना भाइरसको पिक समय गइसकेर अब तल झर्ने क्रममा छ। धेरै जना सामान्य रुघा खोकीका बिरामी हुँदा टेष्ट गर्ने, आइसोलेसनमा बस्ने, सामान्य बिरामी हुँदा जाँच गर्ने क्रम बढेकाले एकापसमा भेटघाट नभएकाले पिक ब्रेक गरिदिन सहयोग पुर्‍याउँछ। त्यसैले चीनमा केही कम हुँदै गर्दा अन्य देशमा फैलिरहेको छ। केही उच्च विन्दुमा पुगेर मात्रै रोकिने विज्ञहरुले बताएका छन्। तर, आमजनता सर्तक भएर फैलिन दिइएन भने छिट्टै कम गर्न सकिन्छ।
साधारण रुघाखोकी लाग्दा पनि जाँच गराएर डाक्टरको सल्लाह अनुसार अघि बढ्ने, कोही कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको व्यक्तिसँग भेटिएको र छोइएको जस्तो लागेमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने, आइसोलेसनमा बस्ने चिकित्सकको सल्लाह अनुसार काम गर्ने, कुनै कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको व्यक्तिसँग नजिक नहुने, भीडभाडमा नजाने, संक्रमण देखिसकेपछि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने, हरेक व्यक्तिसँग टाढा बस्ने, सार्वजनिक यातायात नचढ्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र सामान्य रुघाखोकी लाग्दा पनि परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ। क्वारेन्टाइन र आसोलेसनमा बस्नु नै उत्तम विकल्प हो।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले कस्तो भूमिका खेलिरहेको देख्नुहुन्छ?
सरकारले के गर्‍यो, के गरेन भनेर बोल्न त मिल्दैन। तर, पनि सरकारले सर्तकता अपनाए पनि परीक्षण गरेको छैन। तत्काल सरकारले जाँचमा तीव्रता दिनुपर्ने समय हो। सरकारले विभिन्न ठाउँमा गएर परीक्षण गर्न चिकित्सकको टोली खटाउनु पर्ने हो। तर, टेकु अस्पतालमा आएपछि मात्रै परीक्षण गर्नु गलत हो। हालसम्म कोरोना भाइरसको कारणले मृत्यु भएका ४९ प्रतिशत मुटु, क्यान्सर, मधुमेहका बिरामी र वृद्धवृद्धा छन्। यस्ता बिरामी पहिचान गरी जाँच गर्ने कुरामा सरकार चनाखो हुनुपर्छ। त्यस्तो छैन।
कोरोना भाइरसको जाँच गर्ने टेकु अस्पतालमात्र भएकाले अन्य निजी अस्पतालहरुलाई पनि सहभागी गराएर जाँचमा तीव्रता दिन नसक्नु ठूलो कमजोरी र लापरवाही हो। सरकारले लक डाउन गरेको छ, यो राम्रो कदम हो। अब परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्छ।
कोरोना भाइरसबाट जोगिन के गर्नुपर्छ ?
सर्जिकल माक्स लगाउने, आफूले प्रयोग गरेको सामान नष्ट गर्ने, हातमा पञ्जा लागाउने, ३० सेकेण्डसम्म साबुन पानीले हात धुने, भीडभाडमा नजाने, दैनिक ज्वरो नाप्ने, मुखमा हात लगि नराख्ने, मानिसहरुसँग अलि टाढा भएर कुरा गर्ने, भीडभाडमा नजाने, कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको ठाउँमा बसोबास गर्नेहरु घरबाट बाहिर नस्किनु नै सुरक्षित हुने तरिका हो।
कोरोनाबाट बच्न कसरी सचेत रहने ?
मठ मन्दिरमा पूजा गरेमा, बेसार खाएमा निको हुन्छ भन्ने भ्रमा नपर्ने। संक्रमित को हो? को होइन ? भन्ने थाहा पाउन जाँच गर्ने। भीडभाडमा नजाने, सामान्य रुघा खोकी लाग्दा घरमा बसेर सिटामोल खाएर नबस्ने, टेकुमा गएर जाँच गर्ने, त्रासमा नबस्ने, खानेकुरा र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ।
सरुवा रोग विशेषज्ञका रुपमा आमनेपालीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
कोरोना भाइरस लाग्दैमा मरिँदैन। कोरोना भाइरस निको भएको पनि छ। दम, खोकी, क्यान्सर भएकामा मृत्युदर बढी छ। त्यस्ता व्यक्तिहरुले विशेष ध्यान दिने। कारोना भाइरस लागेको खण्डमा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उपचार गर्ने, त्रासमा बसेर आत्तिएर हुँदैन। सावधानी अपनाएमा मुक्त हुन सकिन्छ। त्यही अनुसार साथीभाइलाई सल्लाह दिने काम गर्ने, भाइरस संक्रमण भएको देशमा भए सावधानी अपनाएर एक्लै बस्ने र बाहिर हिँड्नु हुँदैन।
(सरुवा रोगमा विद्यावारिधी गरेकी डा.शेर्पा आइपासकी वरिष्ठ अनुसन्धान सल्लाहकार हुन्)
Published Date: Tuesday, 24th March 14:24:29 PM